Ingozi yobuthongo kwabashayelayo
INDODA ekhathele izumeke ishayela
INTATHELI YEZEZIMOTO | December 7, 2019
KUJWAYELEKILE ukuthi abashayeli bahlaselwe yisithongwana besemgwaqweni.
Uma lesi simo sikufikela ngalesi sikhathi samaholidi usendleleni ingabe wenza njani?
Umphathi weMasterDrive u-Eugene Herbert uthe uma kuphephile, hlaba ikhefu ekushayeleni.
“Uma ujutshwe njengomunye wabashayeli ngalesi sikhathi futhi uzwa amehlo akho esinda ushayela, yima egaraji likaphethroli noma endaweni ephephile uhlabe ikhefu. Noma ngabe lokhu ukumela ukudla into enempilo, ukuphumuza amehlo noma ngabe ukuzilula kodwa lalela okushiwo wumzimba wakho.”
UHerbert ukhiphe nanka amathiphu angakusiza uma uhlaselwa wukukhathala ushayela:
- Ukukhathala kungakuhlasela noma yinini endleleni, yenza ucwaningo ngokuthi mangaki amagaraji endleleni ozoyihamba nebanga eliphakathi kwakho. Ngalokhu ungakwazi ukubona ukuthi ungalihlaba kuphi ikhefu uma usuhlaselwa wukukhathala.
- Abanye ongoti baphakamisa ukuthatha isihlwathi semizuzu engu-20 endleleni endaweni ephephile.
Lokhu kodwa kuncike kumuntu. Uma ukulala isikhashana kukwenza ukhathale kakhulu, kugweme.
- Uma kwenzeka, shayela nomuntu enizoshintshana naye. Ucwaningo luveza ukuthi ukushayela amahora amabili anesikhathi esiyimizuzu engu-15 phakathi sokuphumula, sikahle ngaphambi kokushintshana.
- Qaphela ngokusebenzisa izikhuthazi njenge-coffee, iziphuzo ezinikeza umdlandla ukuze uphaphame.
Yize kungabasebenzela abanye kodwa kwabanye akusebenzi. Okungcono phuza amanzi bese udla into enempilo njengobhanana.
- Uma uzwa ukuthi ngeke usakwazi ukushayela * -30km wokugcina ngaphambi kokufika egaraji ukuze nishintshane, kungcono thola indawo ephephile eceleni komgwaqo hhayi enehlathi okungacasha kulo izigebengu bese niyashintshana.
- Ngesikhathi nisashintshana sebenzisa lelo thuba ukuzilula ngokushesha ukuze uzobuyelwa wumdlandla.
- ENingizimu Afrika akululekwa ukuthi upake eceleni komgwaqo bese uthatha isihlwathi. Yenza isiqiniseko sokuthi uphumule ngokwanele ukuthi ungakwazi ukushayela ufike egaraji.
- Qaphela ukuthi yini ekwenza wozele. Noma kungaba wukudla okunoshukela noma yizikhathi ezithile zosuku, kugweme futhi ukuhlelele kahle.
- Ukuzumeka ushayela kungaba nobungozi obukhulu kakhulu kwabaningi. “Kungcono kube khona okwenzayo uma usuzwa amehlo akho encipha kunokuzifaka engcupheni,” kusho uHerbert.